साझा बस र त्यसका कन्डक्टर* – United We Blog
Posted byUWB April 16, 2013 Posted inAnnouncements
The revival of Sajha bus service is truly an encouraging step towards solving problems of mismanagement in the chaotic public transportation system in Kathmandu. Hope KMD succeeds in his mission.
उनन्सत्तरीमा सबैभन्दा जनपयोगी काम काठमान्डूमा बर्षको अन्तिम दिनमा भए जस्तो लाग्यो । सहरमा सार्वजनिक बस सेवा साझा यातायात पुनर्जागृत भयो । अहिलेलाइ १६ वटा बसले दुईवटा रूटमा सेवा दिने भनिएको छ । तर आशा गर्न सकिन्छ सेवाको विस्तार हुन्छ- शहरभरी, देशैभरी र विदेशसम्म पनि । सञ्चालकहरूले पनि त्यो प्रतिज्ञा गरेका छन् । साझा यातायातको सेवा विस्तारबाट भन्दा ठूलो आशा मैले यो प्रयासले नेपालमा रही आएको नीजि यातायात सेवालाई ‘राम्रो हुन’ प्रेरणा र दबाब दिने छ भन्ने हो । एनसेलको आगमनले एनटीसीलाई कसरी प्रेरणा र सकारात्मक दबाब मिलेको छ भन्नेकुरा सहरमा हालै खुलेका एनटीसीका सेवा केन्द्रहरूले प्रष्ट्याउछन् ।
काठमान्डूमा सार्वजनिक यातायातको दुर्दशाको चित्रण/बर्णन गरी के साध्ये । निकै अगाडीको एउटा लेख र केही अगिको एउटा ब्लग इन्ट्रीमा मैले त्यो प्रयास गरिसकेकोले अहिले दोहोर्याउदिन । त्यो दुर्दशाबाट अलिकति भएपनि मुक्ति पाइएला भन्ने आशा भएकैले अहिले यति लेख्न जाँगर चलेको हो ।
हाम्रो देशमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको प्रबन्धनको हो । स्रोत, साधन, जनशक्ति र ज्ञान नभएको हैन…